WAR CAD: Ole Gunnar Solskjaer Oo Loo Sheegay In Anthony Martial Yahay Lama Taabtaan & Sababta Oo La Ogaaday – Wararka Ciyaaraha Maanta
WAR CAD: Ole Gunnar Solskjaer Oo Loo Sheegay In Anthony Martial Yahay Lama Taabtaan & Sababta Oo La Ogaaday
May 15, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Tababaraha Kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa loo sheegay in uuna iibin karin xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Man United ee Anthony Martial sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka England.
Ninka Saamiga ku leh kooxda Man United ee Joel Glazer ayaa sheegay in aan xiddiga reer France laga iibin karin kooxda sabab la xidhiidha in uu u arko “Pele” Man United.
Tababare Ole Gunnar Ole Gunnar Solskjae ayaa wax qabadka xiddiga su,aal ka keenay isaga oo sheegay in uuna soo bandhigin wax walba oo uu awoodo si uu u caawiyo kooxda.
Taas ayaa keentay in uu tababaruhu ka fiirsado in uu iska iibiyo 23 jirka reer France marka la gaadho suuqa kala iibsiga xagaaga ee dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Laakiin booska Martial ayaa la sheegayaa in uu amaan yahay sabab la xiriirta in uu ninka saamiga ku leh kooxda ee Glazer uu taageere weyn u yahay kooxda waliba yahay xiddiga uu aadka ugu jecelyahay kooxda.
Martial ayaa heshiis cusub oo ilaa 2023 ah u saxiixay Man United suuqii Jnauary kaas oo uu todobaadkii ku qaadanayo 200 kun oo Gini inkasta oo uu kaliya 2 gool dhaliyay 13-kii kulan ee uu u ciyaaray Man United.
Xiddiga ayaa United kaga soo biiray Monaco xagaaagii 2015 isaga oo ugu yimid lacag dhan 36 milyan oo euro laakiin mustaqbalkiisa ayaa shaki la galiyay xagaagii hore kadib markii uu Jose Mourinho lumiyay kalsoonidii uu u qabay.